Roberto Firmino Oo Sheegay Sida Ay Bixitaankii Philippe Coutinho Saamayn Ugu Yeelatay Liverpool – Kooxda.com
Home 2018 March Ingiriiska, Wararka Maanta Roberto Firmino Oo Sheegay Sida Ay Bixitaankii Philippe Coutinho Saamayn Ugu Yeelatay Liverpool
Weeraryahanka Kooxda Liverpool ee Roberto Firmino ayaa markii ugu horaysay ka hadlay saamayntii ay kooxda Liverpool ku yeelatay bixitaankii Philippe Coutinho ee suuqii Janaury.
25 jirka reer Brazil ee khadka dhexe ayaa Barcelona ugu biiray suuqii January lacag dhan 145 milyan euro.
Coutinho ayaa ka mid ahaa xiddigaha ugu fiican kooxda hadii uuna ahaynba midkii ugu fiicnaa laakiin Liverpool ayaa tan ilaa markii uu tagay kaliya laga badiyay 3 kulan oo ka mid ah 12 kulan oo ay ciyaareen iyaga oo dhaliyay goolal aad u badan.
Firmino ayaa ku raaxaysanaya qaab ciyareedkiisii ugu fiicnaa ee Liverpool halka Mohamed salah uu gool dhaliyay 36 jiirk ilaa haatan xilli ciyaareedka.
Markii wax laga waydiiyay saamayntii Coutinho ee uu Liverpool ku yeeshay markii uu ka tagay ayuu u sheega GOAL” waxa aanu badalnay qaabkii aanu ciyaaraynay markii uu baxay, waa kooxdee aan jeclayn in ay Coutinho ku haysato kooxdeeda?.
Laakiin waxa uu sii raaciyay in uu wali xiriirkoodu yahay mid aad u fiican sidii wakhtigii hore uu ahaa.
“Waxa aan ka wal-walaa kaliya in aan si fiican u ciyaaro oo aan caawiyo kooxda Liverpool sida ugu macquulsan”.
“Waxa aanu dhalinaa goolal badan, ku guulaysiga horyaalku xilli ciyaareedkan wuu adag yahay sidaa darteed waxa aanu ku dagaami doonaa in aan u soo baxno champions League xilli ciyaareedka dambe waana midaas u jeedkeenu”.